साउदीमा चौबीस घन्टापछि पुनः कोरोना निको हुने बढ्यो, कहाँ कति उपचार हुँदै ? -
साउदीमा चौबीस घन्टापछि पुनः कोरोना निको हुने बढ्यो, कहाँ कति उपचार हुँदै ?
साउदीमा आज १४ सय जना कोरोना मुक्त
४ भाद्र २०७७, बिहीबार २०:२७ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा चौबीस घन्टापछि बिहिवार पुनः कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)संक्रमित उपचारपछि निको हुने बढेको छ ।
यसै क्रममा बिहीबार १ हजार ३८५ जना कोरोना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.मोहम्मद अल अब्दुलीले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । प्रवक्ता डा. अब्दुलीका अनुसार हालसम्म साउदीमा कोरोना निको हुनेको दुई लाख ७५ हजार ४७६ जना पुगेका छन् ।
बुधबार नयाँ संक्रमित बढे पनि पुनः बिहीबार उपचारपछि निको हुनेको संख्या बढेको हो । साउदी अरेबियामा कोरोना भाइरस गत मार्च २ तारीखबाट शुरु भएको थियो ।
त्यसैगरी यहाँ आज कोरोना भाइरस नयाँ संक्रमित १ हजार २८५ जना थपिएको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनकाअनुसारको उपचारपछि निको हुने कुल संक्रमित तीन लाख ३ हजार ९७३ जना पुगेका छन् ।
यहाँ अब कुल संक्रमितमध्ये २४ हजार ९४९ जनाको विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेको प्रवक्ताले बताए । ‘ तीमध्ये १ हजार ६८२ जना गम्भीर अवस्था उपचाररत हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
बिहीबारको अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितभन्दा उपचारपछि निको हुने ९८ जना धेरै छन् ।
यस्तै बिहीबारसम्म साउदीभर कोरोनाबाट ३ हजार ५४८ जनाको मृत्यु भैसकेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना भाइरसबाट आजै मात्र ४२ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएका हुन् ।
विहिबारसम्म साउदी अरेबियाको रियादमा सबैभन्दा धेरै २ हजार २२३५ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यहाँको जेद्दामा २ हजार १७५, दमाम १ हजार ५१९, मदिना १ हजार ३०५, मक्का १ हजार २१७, अल हफुफ १ हजार १९६, जिजान ८३१, अल मुबराज ६२९, हाईल ५०६, बुरैदा ४८३, यान्बु ४७२, अल खोबार ४६५, तैफ ४६०, कातिफ ४१८, खमिस मुसायत ३९५, नजरान ३६२, बयश ३०५, हफार अल बतिन ३०५, जुवेल ३०१ जना उपचाररत छन् ।
त्यसैगरी आभा २७२, अबु आरीश २६९, अल कुनफदा २५५, उनैजा २३९, दहराइन २३७, ताबुक २३४, सबत अल अलाया २२९, समतह २०३, तथलिथ १९३, अल खर्ज १८७, सबया १८६, बुकाय १८३, अल मिदहनाब १६१, कील्वाह १५७ र बिशाह १५१ जनाको उपचार भइरहेको प्रवक्ता डा. अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
•साउदीमा उपचारपछि तीन गुणा कोरोना संक्रमित निको
•साउदीमा पुनः नयाँ संक्रमित बढ्यो, १२ सय कोरोना उपचारपछि निको